दिनको यी समय अशुभ हुने भएकाले भुलेर पनि नगर्नुहोस् शुभ कामको सुरुवात ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/दिनको यी समय अशुभ हुने भएकाले भुलेर पनि नगर्नुहोस् शुभ कामको सुरुवात !
दिनको यी समय अशुभ हुने भएकाले भुलेर पनि नगर्नुहोस् शुभ कामको सुरुवात !
हिन्दु शास्त्र अनुसार हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले हरेक शुभ कार्य गर्दा शुभ मूहूर्त हेर्ने परम्परा रहेको छ ।
शुभ कामको लागि शुभ साइत जुराएर कामको सुरुवात गरे सफल हुने धार्मिक मान्यता रहेको कारण साइत जुराउने चलन रही आएको छ ।अशु’भ समयमा शुभ काम थालियो भने काममा सफलता हैन असफलता प्राप्त हुने विश्वास रहेको छ ।
जुन बेला रा’हुको समय चलेको हुन्छ त्यो समयमा शुभ कार्य गर्न नहुने धार्मिक मान्यता रहेको छ । श’निग्रहपछि अशु’भ मानिएको रा’हुको छायाँले गर्दा अशु’भ फल प्राप्त हुने गर्दछ ।
हरेक दिन राहुको समय ९० मिनेट हुने भएकाले त्यो समयमा कार्य गर्नु शुभ मानिदैन् । सर्योदयदेखि लिएर सूर्यास्तसम्म आठौँ भागको स्वामीलाई रा’हु मानिन्छ । त्यसकारण हरेक दिन रा’हुको सयम चलेको बेला शुभ कार्य गर्न नहुने बताएको छ । जान्नुहोस् कुन समय हो त रा’हुको ।
१.आइतबार रा’हुकालको समय बेलुका ०४:४५ देखी ६:१५ बजेसम्म रहनेछ २.सोमबार रा’हुकालको समय बिहान ०७ :४५ देखी ९:१५ बजेसम्म रहनेछ। ३. मंगलबार रा’हुकालको समय दिउसो ०३:१५ देखी ०४:४५ बजेसम्म रहनेछ। ४. बुधवार रा’हुकालको समय दिउसो १२:१५ देखी ०१:४५ बजेसम्म रहनेछ।
५.बिहिबार रा’हुकालको समय दिउसो ०१:४५ देखी ३:१५ बजेसम्म रहनेछ। ६.शुक्रवार रा’हुकालको समय बिहान १०:४५ देखी १२:१५ बजेसम्म रहनेछ। ७.शनिवार रा’हुकालको समय बिहान ९:१५ देखी १०:४५ बजेसम्म रहनेछ।
हरेक दिन रा’हुको समय ९० मिनेट हुने भएकाले त्यो समयमा कार्य गर्नु शुभ मानिदैन् । सर्योदयदेखि लिएर सूर्यास्तसम्म आठौँ भागको स्वामीलाई रा’हु मानिन्छ । त्यसकारण हरेक दिन रा’हुको सयम चलेको बेला शुभ कार्य गर्न नहुने बताएको छ । कुन समय हो त रा’हुको ? यसको बारेमा माथी जानकारी दिईसकेका छौ ।
शरिर पछाडी टाउको भएका संसारकै अनौठो मानिस, डाक्टरले २४ घण्टा पनि बाँच्दैन भनेका ओलिभिएरा यसरी बने संसारकै उत्कृष्ट (भिडियो हेर्नुस्)
ठुला स्त’न भएकै कारण मालामाल भइन् यी सुन्दरी, सुरक्षाका लागि राखेकी छन् बडीगा’र्ड (फोटो फिचर)
यी महिलाले लाखौ खर्च गरेर घटाइन् ८८ किलो तौल, थिइन् १४६ किलोकी
कसरी स’म्प’र्क गर्दा बच्चा बस्छ, बाँ’झोप’नाबाट कसरी बच्ने ? डा. सबिना सिम्खडाको सुझाब हेरौ यो कुराकानी..
संसारकै सबैभन्दा कम उमेरका सेफ, जसले मच्चाइरहेका छन् संसार भर तहल्का (भिडियो हेर्नुस्)